10 magac oo waaweyn oo astaankoodii beddelay 2014 | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadaha naqshadeynta waxay u muuqdaan kuwo is beddelaya sannad kasta iyo noocyada qaarkood waxay u arkaan fursad markii wax ka mid ah isbedeladani ay ku habboon yihiin astaanta ay ku aqoonsadaan macaamilka.
Kadib waxaan soo bandhigeynaa 10 magac oo caan ah sanadka 2014 waxay bedeleen astaanta hal mar oo cusbooneysiin ah waqtiyada. Iyaga dhexdooda waxaan ku muujin karnaa PayPal, Farshaxanka Farshaxanka, Pizza Hut ama 7up, noocyada ay wada aqoonsan yihiin oo tilmaamaya khadadka iyo xaglaha cusub ee astaantooda caanka ah.
1 Art Doona Qallooca,
5 Madow + Kabadh
Art Doona Qallooca,
Art Doona Qallooca, wuxuu mar horeba u baahday isbeddel xag-jir ah oo astaantiisa ah iyo boggeeda internetka oo ugu dambeyntii xitaa la yimid barnaamij loogu talagalay qalabka moobiilka. Naqshad cusub oo cusub oo loogu talagalay astaanta cusub ee mataleysa boggan caanka ah ee sawir iyo farshaxan.
Pizza Hut waxay soo bandhigtay olole cusub oo xayeysiis ah oo loogu magac daray "Dhadhankii Hada" iyo waayo munaasabaddu waxay billowday astaan ​​cusub taas oo u taagan midabka kaliya ee casaanka ah sida hay'ad u gaar ah oo loogu talagalay isbeddel xagjir ah inkasta oo ay raacdo nuxurka pizzas-keeda caanka ah
Summad taas si fiican looma yaqaan qaybahaas laakiin inuu adeegsaday 2014 si uu ugu beddelo astaamo caqli-gal ah oo yar oo haasaawa leh oo wadnahaas ku taal dhammaadka astaanta. Isbeddel xiiso leh oo baabi'inaya diyaaraddii ku jirtay astaantii hore.
Marka la gaaro 7up waxaan ka amba baxeynaa safafka toosan ee khadadkiisa ilaa geesaha la adkeeyay adoo leh curveyo badalaya daqiiqada cabitaankan caanka ah.
Madow + Kabadh
Black + Decker wuxuu aadaa midabka liinta ah ee loo adeegsaday qeyb kamid ah astaanteedii hore iyo hadda magaca sumaddan caanka ah waxaa lagu soo ururiyay leydi qalabka.
Calaamadan ganacsiga haa waxay ku samaynaysaa isbedel xagjir ah astaantiisa ka soco buluug qoraal ahaan illaa muuqaalka astaan ​​meteleysa wax yar oo ka sarreysa magaca astaanta oo leh lahjad toosan.
Dusha sare waa cunsurka ugu caansan cusbooneysiinta astaanta astaanta adeegyadan bangiyada ee caanka ah.
El fiidmeer caan ah ayaa noqda xoogaa macquul ah iyadoo loo adeegsanayo kaliya caddaan, madow iyo casaan matalaadda astaanta cusub ee sumadda noocyadan cabitaannada aalkolada ah.
Ma jiraan ereyo muujinaya astaanta cusub waxaa qoray Monster. Sawirku wuxuu u dhigmaa kun eray.
Dhamaad isbeddelka ugu xag-jirka ah ee ka imanaya waxa matalaya farabadan canab makhaayada la maro waxaan u isticmaalaa hooska xiisaha leh ee cagaarka ah iyo adeegsiga xaraf jilicsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 10 magac oo waaweyn oo bedelay naqshadooda astaanta sanadkii 2014